အကို ဘာတွေ ဖြစ်လို့လဲ၊ စိတ်မပါရင် ခဏနားလေ၊
ရပ်တော့ မရပ်ပါနဲ့အုံး၊ အရေးအကြောင်းကြီးရင် ပြောပါ
ဟုတ်ပါတယ်... နားချင်ရင် holiday ပေးပါတယ်... ပင်စင်ယူတဲ့အထိတော့ မလုပ်ပါနဲ့ဦး...
အကိုဘာဖြစ်လို့လဲဟင်?.... အံ့သြမိတယ်...တကယ်ကြီးကိုနားတော့မှာလား...ပြန်လာပါ...ခဏနားတာဘဲ ဖြစ်ပါစေလို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်....
လေးစားချစ်ခင်တဲ့ mie nge
စိတ်မွန်းကြပ်တာလေး သက်သာအောင် ခဏ နား၊ စိတ်ပါတော့ ရေးတာပေါ့။
လုပ်စရာတွေ များနေတာ နားလည် ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။
အေးအေးဆေးဆေးနား၊ စိတ်ပါရင် ပြန်လာပါနော်။
မရပ်နားစေချင်ပေမယ့် ဘာဖြစ်လို့ မှန်းမသိလို့....
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကဗျာအသစ်လေးတွေ ဖတ်ရမယ့်နေ့ ကို မျှော်နေပါမယ်...
ဟုတ်ပါတယ် - ရုတ်တရက်ကြီး ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲ။ အပေါ်က မောင်နှမတွေ ပြောကြတဲ့အတိုင်းပဲ ခဏအနားယူတာမျိုးပဲ ဖြစ်စေချင်တယ်။ ဘလော့ဂ် ရေးတာကိုတော့ အပြီးမရပ်လိုက်ပါနဲ့။ ဘလော့ဂ် လောကမှာ ကိုအောင်သာငယ် ဘလော့ဂ်လို သုတ၊ ရသ၊ လှုပ်ရှားမှုနှင့် ဘ၀အတွေ့အကြုံတွေ စုံစုံလင်လင် တွေ့ရတဲ့ ဘလော့ဂ်တွေ အများကြီး ရှိနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အခုလို ကလေးကျောင်းပိတ်တဲ့ ရာသီမှာ စိတ်ပြေလက်ပျောက် Holiday သွားပြီး ပြန်လာရင် ပြန်ရေးဖို့ ကျွန်မ အကြံပြုပါတယ်။
အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် ခဏနားပြီး ပြန်လာပါဗျာ..
မနေ့ကပဲ ကျနော်တို့ ပြောခဲ့ကြသေးတယ်လေ..း(
You don't need to pull yourself back.
မျှဝေချင်လို့ ရေးနေတယ်ဆိုရင် ဘာဖြစ်ဖြစ် ဆက်လက်မျှ ဝေနေဖို့ပါပဲ...
အစ်ကို ဒီတစ်ခါ ကျနော်ပြောအလှည့်......အထက်ပါအတိုင်းပဲ
လုံးဝ ရပ်နားလိုက်တာမျိုးတော့ မလုပ်စေချင်ဘူးဗျာ။
လုပ်စရာရှိတာတွေလုပ်ပြီး စိတ်ကြည်သာတဲ့ တနေ့ ပြန်လာခဲ့ပါ အကို...
ဘယ်လို ဖြစ်တာပါလဲ ခင်ဗျာ
ကျနော်က အကို့ရဲ့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်တယောက်ပါ
ခြေရာတွေ မချန်တတ်ပေမဲ့ ဒီဘလော့ ကို အမြဲ လာဖတ်နေကျပါ အကိုရေးသော ကဗျာများအားလုံးနှင့် နိုင်ငံရေး နွယ်သော စာများ ၀တ္တုများ အားလုံးကို နှစ်သက်သဘောကျသူ တဦးပါ
ပြန်လာမဲ့နေ့ကို မျှော်နေပါမယ် ခင်ဗျာ
ရပ်တော့ မရပ်ပါနဲ့ အစ်ကိုရေ။ စိတ်ကူးပေါက်ရင် ပြန်ရေးပါဦး။
ဒါနဲ့ Mafia War နဲ့ အလုပ်များနေလို့ ဘလော့ခ် ရေးဖို့ အချိန်မရှိတော့ တာလား။ :P
ဘလော့ဂ်ရေးတယ် ဆိုတာက ဘယ်သူက ရိုက်နှက်ခိုင်းလို့မှ မဟုတ်တာ ..
အကြောင်းတခုခုကြောင့် နားတဲ့ အခါလည်း နားပေါ့ ..
စိတ်ပါတဲ့ အချိန် အဆင်ပြေတဲ့ အချိန်တော့ ပြန်ရေးပါဦး ..
ခင်မောင်ထူး ဆိုခဲ့တဲ့ သီချင်း
ဟေမန်ကို အံတုဖို့ ပြန်လာပါ
အားတဲ့အချိန်ရေးပေါ့ အကိုရာ... မရေးတော့ဘူးတော့ မလုပ်ပါနဲ့..
ကျွန်တော့်ဘလော့မှာ ရှားရှားပါးပါး ကွန်မန့်ရေးမယ့်သူတစ်ယောက် လျော့သွားမှစိုးလို့... :P
ဘယ်လိုအခက်အခဲမျိုးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရအောင်ကျော်လွှားစေချင်ပါတယ် ခင်မင်သောပရိတ်သတ်များအတွက် အမြန်ပြန်လာဖို့ မျှော်လင့်နေပါတယ်
what is wrong with you? Art work is volunteer. You areagood guitarist,your poems are great, you are good at other pieces of writings, whatever you write are not useless for people. i believe you write millions of poems in your mind and you sing millions of songs in your heart.
I always wish you are doing okay. come back and i believe you won't give up, my bro.
နားတယ်ဆိုလည်း အပြီးအထိတော့ မလုပ်ပါနဲ့အစ်ကိုရေ ...
ဘယ်လိုဖြစ်ရတာတုန်း အကို ကြီးရာ
စိတ် အဆာပြေ ရေးနေကြတယ်ဆိုပေမဲ့
ကျနော်တို့အတွက် သင်ယူစရာ မျှဝေခံစားစရာတွေအများကြီး ရတဲ့ အကို့အိမ်တခါးလေး အမြဲတော့ပိတ်မထားလိုက်ပါနဲ့ဗျာ..
အကို ပြန်လာမယ်ဆိုတာ ယုံတယ်ဗျာ အဟေးဟေး ၊
အစစအရာရာ ပို အဆင်ပြေပါစေ ... ။
နှုတ်ဆက်ခြင်းဆိုတာ မကြားလိုပါ၊ မမြင်လိုပါ။
တူမကြီး တကယ် စိတ်မကောင်းပါ
တစ်နေ့ ကျရင် ပို့စ်အသစ်လေးတစ်ခု ပြန်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ပါတယ်
တခါစာရေးရင် တသက်လုံးစာရေးဆရာပဲလေ အစ်ကို ..။ စာရေးဆရာမှ ပင်စင်မရှိဘူးဗျ။
အကိုကြီး မနေ့က တစ်ချိန်လုံးပျော်ပျော် ရွှင်ရွှင်နဲ့စကားတွေ ပြောနေပြီးမှ ရုတ်တရက်ကြီး ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲဗျာ..။
ကိုအောင်သာငယ်စာထဲမှာ ဘလော့ရေးတာ ရပ်နား တယ်ပဲပြောတာပါ။
တသက်လုံးစာ ဘိုင့်ဘိုင့်လို့ ပြောသွားဘူးလေ။ ပြီးတော့ ဘလော့ မလည်တော့ပါလည်း ပါဘူး။
စာရေးဆရာ စာမူခတွေများနေပြီ။ စာဆက်ရေးပါ။ ခဏတဖြုတ် စိတ်ပြေလက်ပျောက်နားပေါ့။ ပြီးရင်တော့ ပြန်ရေးပါဗျာ။
အကို...ရေးချင်စိတ်ပေါ်လာရင် ဆက်ရေးပါဦး..ဒီမှာ အကို့ရဲ့ ညီအကို မောင်နှမတွေ ရှိနေတယ်လေ... ရပ်နားပေမယ့် ပိတ်တော့ မသွားပါနဲ့နော်..စာတွေ ကဗျာတွေ ဖတ်ချင်လို့ မှတ်ထားတာတွေ ရှိနေသေးလို့ပါ။
(tututha, July 15, 2009 12:29 AM
သူ ပြော တဲ့ အတိုင်းပဲ သံယောင်လိုက်ပါတယ်။
နားပါ မနားပါနဲ့ ရေးပါ မရေးပါနဲ့ ဆိုတဲ့ တားမြစ်သံတွေထက်၊ ကိုအောင်သာငယ် အဆင်ပြေဖို့က ပို အရေးကြီးပါတယ်။
(ဒါကြောင့်) အဆင်ပြေပါစေလို့ပဲ ညီမ ဆုတောင်းပါတယ်။
ဟုတ်တယ်အစ်ကို စာရေးဆရာဆိုတာ ပင်စင်ယူလို့မရဘူး...
နားနားပြီး ဘလောဂ့်တာပေါ့ အစ်ကိုရာ..။
အကို အနုပညာဆိုတာ အဆိပ်အတောက်အကင်းဆုံးနဲ့
ဘယ်အချိန်မှာ ဘလော့ရေးခြင်းကို ရပ်နားမလည်း ဘယ်အချိန်မှာ ဘလော့ဂါဆိုတဲ့ဘ၀ကို ကျောခိုင်းမလည်း နက်ဝပ်ကေဘယ်တွေကြား တိတ်ဆိတ်သွားမယ့် ခင်ဗျားကဗျာ .... ကြာတော့လည်း မေ့သွားကြမှာပါ... အားပေးသူတွေကော နှောင့်ယှက်သူတွေကော... တချို့သူငယ်ချင်းတွေက အမှတ်တရလာလည်နေကြမယ်... အမှန်တကယ်တော့ များများရေးကြရမယ်... ဘယ်သူတွေဘယ်လောက်ပဲ အမြင်ကတ်ကတ် ဘယ်သူတွေဘယ်လောက်ပဲ မုန်းတီးနေနေ.. ဖြစ်နိုင်ရင်ခင်ဗျားပြန်ရေးပါ... နောက်ဆုံးအချိန်အထိ ခင်ဗျားရှိနေမယ့် webစာမျက်နှာတွေကို ကျွန်တော်တို့မျော်လင့်နေမယ် ကိုအောင်သာငယ်ကျွန်တော်တို့ရေးနေကြရမယ် ကျွန်တော်တို့ ရေးခဲ့ရဦးမယ်... ခင်ဗျားကိုချစ်တဲ့ကဗျာအတွက် ကဗျာကိုချစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက် ...
ဘာတွေအခက်အခဲဖြစ်နေလဲ အစ်ကို ခဏနားတာဘဲ ဖြစ်ပါစေ အစ်ကို
ဝေးပြီးတစ်နေ့ ပြန်တွေ့ကြမယ် အဲလိုမျိုးလုပ်နော်
အဆင်ပြေ အချိန်ရတဲ့အခါ ဆက်ရေးပေးပါခင်ဗျာ
ဘဝမှာ အပြောင်းအလဲတွေက တခါမက ရှိတတ်ပါတယ်...
အကိုက အရာရာကို သူများတွေထက်ပိုပြီး ခံနိုင်ရည်ရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်...
ဒီဘလော့လေးကိုတော့ အချိန်ရခဲ့ရင် ဆက်ရေးစေချင်ပါတယ်...
အကို့ရဲ့ ဘဝမှတ်တမ်းလေး ကို အဆုံးမသတ်ပါနဲ့အုံးနော်...
အကိုစာဆက်ရေးမယ့် အချိန်ကို စောင့်နေမယ်...
အစ်ကိုရေ........အနော်စီဘောက်စ်မှာမရေးခဲ့ ကွန့်မန့်မပေးခဲ့ပေမယ့်(ရုံးမှာဖတ်ဖြစ်လို့ မြန်မာဖောင့်ရိုက်လို့မရလို့) တနည်းအားဖြင့်ခြေရာလေးတွေမထားခဲ့ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် မကြာခဏဆိုသလိုရောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲလိုကြီးတော့လုံးဝစာရေးတာရပ်မပစ်ပါနဲ့အကိုရာ
ခဏတဖြုတ်အနားယူပြီး မချိုသင်းတို့ ပြောသလိုပဲ စိတ်ပါလာရင်ပြန်ရေး..စိတ်မ၀င်စားတဲ့အခါနား...ဒီလိုလေးလုပ်ပါလို့...
အကို့ ချစ်ချစ်နဲ့ စိတ်ကောက်လို့ လား
အကိုဘဲ ဂျစ်တူး ကိုကြတော့အားပေးပြီးတော့----
အား- ၄၇ ယောက်တောင် ရှိနေပါလား။
ကိုအောင်သာငယ်ရေ- ဘလော့ရေးတယ်ဆိုတာ...ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသက်သက် ချည်း လို့ မယူဆဘူး ဆိုရင်တော့.. စိတ်ကြည်လင်..အဆင်ပြေတဲ့ အချိန်မှာ ပြန်ရေးစေ့ချင်ပါတယ်။
ဘလို ဖစ်တာတုန်း အကိုကြီး... အဆင်ပြေရင်ပြန်ရေးပါဗျ.....
ကြည့်စမ်း ဒီလောက်များတဲ့ တောင်းဆိုမှုတွေ..
အဲဒါတော့ မဟုတ်သေးဘူးဗျနော်.. ကိုအောင်သာငယ်..။
ဟေ့လူ ခင်ဗျာကဘာဖြစ်တာလဲ။ ကျုပ်စိတ်မကောင်းဘူးဗျာ။ ကျုပ်ကစာတော့လိုက်ဖတ်ဖြစ်တယ် ဒါပေမဲ့ မမန့်တတ်ဘူး။ ဖြတ်သန်းမူခြင်းတူတဲ့ ခင်ဗျာဘလော့ကိုတွေ့ပြီ ခံတွင်းတွေ့မိခါမှ ခင်ဗျာက လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ။ ခင်ဗျာ တစုံတရာစိတ်ခံစားမူရှိတယ်ဆိုရင်တောင် ရည်ရွယ်ချက်အတွက်ကြောင့် မပြစ်ပယ်သင့်ဘူး။ ဘမျိုးဘိုးတူလုပ်စမ်းပါ။ အားပေးလျှက်